> Resource > iPad > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Xogta laga mini iPad ah 2 (isha)
Iyadoo isha a bandhigay cajiib ah, qori A7, wireless sare iyo barnaamijyadooda awood leh hal-abuurka iyo wax soo saarka, iPad mini 2 noqdo dooqa koowaad ee dad badan markii ay qorsheeyaan in ay iibsadaan kiniin ah. Waxaa sugan, iPad mini bandhigay isha ku soo dejin doonaa guul kale Apple. Waa hagaag, sida la yaab leh oo aan ku xirnayn mini iPad ku soo bandhigay isha yahay, dadka isticmaala dad badan ayaa weli si qalad ah la tirtiro xogta waxtar leh waxa ay ku sida xiriirada, sawiro, iMessages, iwm Maxaad samayn markii waxaas uu aqrinayo?
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa joojiso isticmaalka aad iPad mini 2 degdeg ah, ilaa aad dib ugu heli xogta la tirtiro. Markaas ka heli qalab kabashada xogta u shaqeeya mini iPad 2, sida Wondershare Dr.Fone ee macruufka . Barnaamijkan weyn u shaqeeya oo dhan iPads, oo ay ku jiraan mini iPad ku soo bandhigay isha. Waxaad isticmaali kartaa inuu ka soo kabsado files tirtiray ka mini iPad 2 laba siyaabood: si toos ah aad iPad mini 2 iskaan ama Macdan gurmad Lugood ee file ah oo aad iPad mini 2. Next, aynu soo bixi version maxkamadda hoose si xor ah u leeyihiin marka hore isku day .
Habka 1: Si toos ah soo kabsado xogta tirtiray ka mini iPad la isha bandhigay
Habka 2: Ladnaansho xogta tirtiray on mini ah iPad 2 (bandhigay isha) via gurmad Lugood
Habka 1: Si toos ah soo kabsado xogta tirtiray ka mini iPad bandhigay isha
Tallaabada 1. Isku aad iPad mini 2 oo iskaan
Marka aadan haysan wax gurmad ah ee aad iPad mini bandhigay isha, Jidka waxa ay noqon kartaa fursad weyn u aad ka bogsato xogta tirtiray ka mini iPad 2. Marka hore, xiriiriyaan iPad mini 2 kombuyuutarka. Markaas ordi barnaamijka, iyo suuqa kala hoose la soo bandhigi doonaa sida soo socota. Markaas riix Start Scan badhanka si ay u bilaabaan aad ka baareyso mini iPad bandhigay isha.
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha Leh ceshan iPad mini 2 xogta
Skaanka aad qaadan doonta muddo yar (waxay ku xiran tahay qadarka xogta ku kaydsan aad iPad mini 2). Marka ay ka badan, waxaad ku eegaan kartaa dhammaan xogta laga helay natiijada scan. Just fiiri mid mid iyo sax shayga aad rabto. Markaasuu iyaga ku badbaadin on your computer la mid click ku Ladnaansho button.
Habka 2: Ladnaansho xogta tirtiray on mini ah iPad 2 via gurmad Lugood
Tallaabada 1. Waraaqda gurmad Lugood ah
Run Wondershare Dr.Fone ee macruufka iyo Riix soo kabsado Lugood ee kaabta File on menu ugu sareeya. Waxaad arki doonaa in dhammaan Lugood gurmad files on your computer ku qoran yihiin suuqa kala barnaamijka. Mid ka mid ah si aad u iPad mini bandhigay isha Dooro iyo riix Start Scan soo saaro xogta ka dhex jirta.
Fiiro gaar ah: Habkani oo keliya shaqeeya users isagoo gurmad Lugood ay iPad mini bandhigay isha. Haddii aan, kaliya kor ku xusan waxaad isticmaali kartaa nidaamkii hore.
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha Leh ceshan xogta lumay ka mini iPad 2
Marka scan ay ka badan tahay, oo aad ku eegaan kartaa dhammaan xogta recoverable ka hor inta aadan soo kabsado iyaga. Sax waxyaabaha aad rabto in lagu jiro Xiisaha. Ka dib markii in, wax kasta ayaad ku badbaadin kartaa si aad u computer adigoo gujinaya ku Ladnaansho button.
Fiiro gaar ah: No arrinta habka aad dooratid, Wondershare Dr.Fone ee macruufka ka heli kartaa labada xogta tirtiray iyo xogta jira on your iPad mini bandhigay isha. Xogta tirtiray waa soo bandhigay in orange iyo xogta ee hadda jira waa madow. Waxaad eegista dooran kartaa wax aad rabto iyo waxa ay ka bogsanayaan.